Home - BIM Trainings
Welcome to BIM Trainings.
Check out our network courses from beginner to expert level.
Need help in implementing your company’s IT infrastructure? Get professional help from our technical experts.
Why study only CCNA or CCNP when you can learn more?
Our Experienced team of experts are ready to assist you with your training needs.
With our student centered approach, we are committed to your success without compromise.
The program is so outstanding that it’s amazing how much we learned in suchashort period of time. It was my pleasure to have attended suchadynamic course that was not only fun butastrong encouragement to improve myself and move forward. For future CCIE candidates, I would like to recommend BIM’s CCIE PMP Class, especially for those who really wants to become an actual hands-on and qualified CCIE professionals.
Nay Khant Zaw, CCIE#49729
I amaNP+ student from 1st batch of BIM.I have attended many IT training but BIM is different.Mentors can contribute to students by sharing their decade of experience.Mentors also threw in real world examples that helped in the learning process.The mentors were excellent,friendly and they presented numerous real world examples to make sure students understood the concepts completely.Booster classes are also very effective and useful.I have learned more about networking than I have in the previous experience.I exeeded my expectations and highly recommend anyone.
Saw Yan Paing, Global Treasure Bank Ltd
BIM က ကျောင်း တစ်ကျောင်းဆိုတာထက် ကျွန်တော် တို့  တွေတွက် Networking ကို လေ့လာလိုက်စားနေတဲ့ သူတွေ စုံစည်းရာနေရာ ၊ Real World Network Experience တွေ အပြန်အလှန် ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ရာ နေရာ ၊ CCNA, CCNP, CCIE Theory & Labs တွေကို Exam Focus သင်ကြားရုံပဲ မဟုတ် Real World တွင် ဘယ်လိုတွေ Apply လုပ်လည်း Guide ပေးသော နေရာ ၊ Online Group, Discussion, Lessons တွေ ထား ရှိပေးတဲ့ နေရာ ၊ အတန်း တစ်ခု ကို ဆရာ တစ်ယောက် သင်တဲ့ ပုံစံ မဟုတ်ပဲ အလည့် ကျ သင်တဲ့ ပုံစံ ဖြစ်သည့် အတွက် ဆရာ တစ်ယောက်ချင်းစီ ရဲ့  ရှင်းလင်ချက် အမြင် မတူ ညီတဲ့  Experience များသင်ကြားခြင်း ကို ရရှိတဲ့ နေရာ ၊ တက်ရောက်ပြီးတော့ အတန်းကို ပြန်လည် တက်ရောက်နိုင်တဲ့ နေရာ ဖြစ်တဲ့အတွက် Networking ကို Professional အဖြစ် လေ့လာ လိုက်စားနေတဲ့သူတွေ အနေဖြင့် တက်ရောက် သင်ယူ သင့် သော သင်တန်းကျောင်းဖြစ်ပါတယ် ၊၊
Zwe Thu Ko, Network Solution Manager, Hwawei Myanmar
ဆရာတွေက ကျွန်မလိုမျိုး အခြေခံအားနည်းတဲ့သူကိုပါ လိုက်နိုင်အောင်ရော နားလည်အောင်ရော စိတ်ရှည်ရှည်နဲ့ အထပ်ထပ်ရှင်းပြပေးပါတယ်။ Lab တွေလုပ်ရင်း အခက်အခယ်တွေ့နေရင်လည်း သဘောတရားနားလည်သွားပြီး ကိုယ်တိုင် ကောင်းကောင်း ပြန်လုပ်နိုင်အောင်အထိပါ သင်ပေးပါတယ်…
ကျွန်မ တက်ခဲ့တဲ့ CCNA သင်တန်းကျောင်းလေးပါ။ (CCNP, CCIE တို့ပါ သင်ပါသေးတယ်။) အခုထိလည်း သင်တန်းပြီးတာတောင် မသိတာရှိလို့ အကူအညီတောင်းတိုင်း အမြဲပေးနေတဲ့ သဘောအားကြီးကောင်းတဲ့ သင်တန်းပါ !
ကျွန်တော် BIM နဲ့ စတင်ထိတွေ့ဖြစ်တာကတော့ Networking with Myanmar Networkers(2014) မှာပါ။ Mentor ဆိုတဲ့ အတိုင်း ကျနော်တို့ လူငယ်တွေကို နည်းမှန်လမ်းမှန်နဲ့ Network Engineer ကောင်းတွေပေါ်ထွက် စေဖို့ ရည်ရွယ်ချက်များစွာနဲ့ ပွဲကို လုပ်တာ တွေ့တဲ့ အတွက် တကယ်ကိုလေးစားပါတယ်။ BIM ကို 2014 မှာ CCNP တန်းခွဲတွင် စတတ်ခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။ အရင်က လေ့လာခဲ့တဲ့ ရှုတ်ထွေးနေခဲ့တဲ့ topic များ၊ concept အမှားများ အားလည်း သေချာရှင်းလင်းစွာ နားလည်ခဲ့ပါတယ်။ အလုပ်ထဲမှာလည်း အရင်ကထက်စာလျင် ပိုမိုနားလည်ပြီး နည်းစနစ်မှန်မှန် ပြဿနာများအား လွယ်ကူစွာကျော်ဖြတ်လာနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ သင်တန်းချိန်ပြင်ပတွင် သိလိုသည်များကိုမေးရာတွင်လည်း သေချာနားလည်အောင် အထောက်အထားစုံလင်စွာဖြင့် ရှင်းပြသည့်အတွက်လည်း လေ့လာနိုင်လျင်လေ့လာနိုင်သလောက် တိုးတက်အောင် စေတနာမွန်ဖြင့် ထောက်ပံ့ပေးနေသည်ကိုလည်း သင်တန်းသားတိုင်းသိပါသည်။ကျွန်တော်တို့ ရည်ရွယ်ချက်အိပ်မက်တွေအကောင်အထည်ဖော်ဖို့ BIM က ဖြည့်ဆည်းပေးနေတဲ့နေရာကောင်းတစ်ခုလို့ အကြံဥာဏ်ပေးချင်ပါတယ်။
Nyan Htoo Aung, Network Engineer, Genesis Networks
သင်တန်းချိန်သာမက ပြင်ပအချိန်များမှာပါ လုပ်ငန်းခွင်မှာလိုအပ်နေတဲ့ နည်းပညာတွေ အကြောင်းကို ထိရောက်စွာ အကြံပြုချက်တွေ ပေးနိုင်တဲ့ ဆရာတွေကြောင့် BIMဟာ ကျွန်မတို့ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်အချိန်တွေကို အကောင်းဆုံး နှင့် အထိရောက်ဆုံး အသုံးချ ခွင့်ရတဲ့ သင်တန်းတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။
မပြည့်သက်ဝင်း , Senior Network Engineer, Ooredoo Myanmar
ဆရာတွေရဲ့ စေတနာပါမူ ၊ အင်တိုက် အားတိုက် သင်ကြားပေးမူ၊ အတွေ့ အကြုံများကို မျှဝေပေးမူ၊ တို့ ကြောင့် လေ့လာသင်ကြားရာမှာ ပိုမို အားတက်မိပါတယ်။ နားမလည်သည်များ၊ အလုပ်နဲ့ ပက်သက်သည့် အခက်အခဲများကိုပါ ကူညီပေးတာမို့Trainer သက်သက်မဟုတ်ပဲ Mentor ဆိုတဲ့ အတိုင်း လမ်းပြ သင်ကြားပေးတဲ့ BIM မှာ တက်ခွင့်ရတဲ့ အတွက် ၀မ်းသာဂုဏ်ယူ မိပါတယ်။
ကိုသက်ပိုင်စိုး, System Engineer, KDDI Myanmar